"Samsara" शब्द बौद्धमा के हो?
शमशेर: बौद्ध धर्मको पीडा र अन्तहीन पुनरुत्थानको अवस्था
संसार हामी सिर्जना गर्छौं
बौद्धमा, सारामा प्राय जन्म, मृत्यु, र पुनरुत्थानको अन्त्य चक्रको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। अथवा, तपाईं यसलाई दुःख र असफलता ( डुकखा ) को संसारको रुपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ, निरूवनको विपरीत, जुन पीडा र पुनरुत्थानको चक्रबाट मुक्त भएको अवस्था हो।
शाब्दिक शब्दहरु मा, संस्कृत शब्द सामासरा को अर्थ "प्रवाह" या "गुजरने"। यो व्हील लाइफ द्वारा चित्रित गरिएको छ र आन्तरिक ब्यवस्थापन को बाह्र लिङ्कहरु द्वारा व्याख्या गरिएको छ।
यो लालची, घृणा र अज्ञानता द्वारा बाधा को स्थिति को रूप मा बुझ्न सकिन्छ - वा भ्रम को एक पर्दा को रूप मा सत्य वास्तविकता को लुकाने को रूप मा। पारंपरिक बौद्ध दर्शनमा, हामी सामासारामा एक जीवन पछि फसेको छौँ जब सम्म हामी ज्योति मार्फत जागिर खोज्छौं।
तथापि, सामासाराको सबैभन्दा राम्रो परिभाषा र अधिक आधुनिक आवेदकता संग एक हुन सक्छ थ्यवडा भिक्षु र शिक्षक थन्टोरोकार भिक्खू बाट:
"एक स्थानको सट्टा, यो एक प्रक्रिया हो: संसारहरू बनाउनु र त्यसो त झन् झुकाव लाग्दछ।" र नोट गर्नुहोस् कि यो सिर्जना र चलिरहेको जन्ममा मात्र एकपटक हुँदैन। हामी यो गर्दैछौं सबै समय। "
संसार सिर्जना गर्दै?
हामी केवल संसारहरू सिर्जना गर्दै होइनौं; हामी आफैले पनि सिर्जना गर्दैछौं। हामी प्राणी भौतिक र मानसिक घटना को सबै प्रक्रिया हो। बुद्धले हामीलाई के सिकाउँछ "हामी" स्थायी रूपमा "आत्म" - हाम्रो अहंकार, आत्म-चेतना र व्यक्तित्व - मौलिक वास्तविक होइन तर पहिलेको अवस्था र विकल्पहरूमा निरन्तर पुनरुत्थान गरिएको छ।
क्षण देखि, हाम्रो शरीर, संवेदना, अवधारणात्मक, विचारधारा र विश्वास, र स्थायी, विशिष्ट "मलाई।" को भ्रम सिर्जना गर्न एकसाथ काम गर्दछ।
यसबाहेक, हाम्रो "बाह्य" वास्तविकता हाम्रो "भित्ता" वास्तविकताको प्रक्षेपण हो। हामी वास्तविकताको लागी सधैं संसारको हाम्रो व्यक्तिपरक अनुभवहरूको ठूलो भागमा बनाइन्छ।
एक तरिका मा, हामी प्रत्येक एक अलग दुनिया मा रहछन जसको हामी आफ्नो विचारहरु र धारणाहरु संग।
हामी पुनरुत्थानको बारेमा सोच्न सक्दछौं, त्यसपछि, केहि एक चीज जस्तै एक जीवनबाट अर्को हुन्छ र केहि क्षणमा क्षण हुन्छ। बौद्धमा, पुनरुत्थान वा पुनर्मिलन एक नयाँ आत्मा जन्माएको व्यक्ति (जस्तै हिन्दू धर्ममा विश्वास गरिएको छ) को ट्रांसमिशन छैन , तर जीवनको अवस्था र जीवनको प्रभावलाई नयाँ जीवनमा अगाडी बढ्दै जान्छ। यस प्रकारको समझको साथ, हामी यो मोडेलको अर्थ बुझ्न सक्छौं कि हामी हाम्रो जीवनमा मनोवैज्ञानिक रूपमा धेरै पटक "पुनरुत्थान" छौं।
त्यस्तै गरी, हामी छौँ स्थानहरू विचार गर्न सक्छौं जुन हामी प्रत्येक क्षणमा "पुनरुत्थान" हुन सक्छौं। एक दिनको दौडान हामी सबैलाई पारित गर्न सक्छौं। यस अधिक आधुनिक अर्थमा, छवटा तथ्यहरूलाई मनोवैज्ञानिक राज्यहरूले विचार गर्न सकिन्छ।
महत्त्वपूर्ण बिन्दु भनेको छ कि सममरामा बस्ने एक प्रक्रिया हो - यो हामी केहि गरौं जुन हामी अहिले गर्दैछौं, केवल केहि चीज हामी भविष्यको जीवनको सुरुवातमा गर्छौं। हामी कसरी रोक्न सक्छौं?
Samsara बाट लिबरेशन
यसले हामीलाई चार नोबल सत्यता ल्याउँछ । धेरै मूलतः, सत्यले हामीलाई यसो भन्छ:
1: हामी आफ्नो आफ्नै साम्राज्य सिर्जना गर्दैछौँ
2: हामी कसरी सिमासा बनाइरहेका छौं
3. त्यो हामी सिमसाारा बनाउन रोक्न सक्छौं
4: रोक्न को लागी आठाइट पथ पछ्याइएको छ।
सामासारामा बसोबास गर्ने प्रक्रिया सहायक ब्यवस्थापनको बाह्र लिङ्कहरू द्वारा वर्णन गरिएको छ। हामी देख्छौं पहिलो लिङ्क avidya , अज्ञानता। यो बुद्ध को चार नोबल सच्चाइ को शिक्षण को अज्ञानता छ र हामी वास्तव मा हो जो अज्ञानता पनि छ। यो दोस्रो लिङ्क, साम्मिरामा जान्छ , जसले कर्मको बीउ समावेश गर्दछ। र त्यसमा।
हामी यो चक्र-चिनको बारेमा सोच्न सक्छौं जुन हरेक नयाँ जीवनको सुरुमा हुन्छ। तर एक आधुनिक आधुनिक मनोवैज्ञानिक पढाइबाट, यो हामी केहि पनि गर्दैछौं सबै कुरा पनि हो। यो मनन बननु मुक्तिको पहिलो चरण हो।
सुसमारा र निर्वाण
शिमरामा निरवनसँग भिन्न छ। निर्वाण एक स्थान होइन तर एक राज्य हो जुन न होईन र गैर-भइरहेको छ।
थरावडा बौद्ध धर्मले विरोधी हुनको लागि सिसामा र निभानालाई बुझ्दछ।
महायण बौद्ध धर्ममा , तथापि, निष्ठा बुद्ध प्रकृतिमा यसको फोकस, दुवै samsara र Nirvana दिमाग को खाली स्पष्टता को प्राकृतिक अभिव्यक्ति को रूप मा देख्न सकिन्छ। जब हामी सिमसाारा निर्माण गर्न छाड्यौं, निरुणले स्वाभाविक रूपमा देखा पर्दछ; Nirvana, त्यसपछि, samsara को शुद्ध वास्तविक प्रकृति को रूप मा देख्न सकिन्छ।
तर तपाईं यसलाई बुझ्नुहुन्छ, सन्देश यो छ कि यद्यपि सैमसार को दुखाइ जीवनमा हाम्रो धेरै छ, यो यसको कारण र यसलाई बचाउनका लागि विधिहरू बुझ्न सम्भव छ।
भावन: बौद्ध ध्यान को एक परिचय
छठे दलाई लामा
विद्यार्थी सफलताको लागि सोच कौशल खेती गर्नुहोस्
स्पार्क प्लगको आविष्कारक
मापन वर्कशिटको स्तर समाधानको साथ
हंटर एस थामसन उद्धरण
यो एक घोटाला हो: '16 मान्छे रोलर कोस्टर दुर्घटनामा मरेका' भिडियो
महिनावाना बौद्ध धर्मको दुई सत्यता
समाज विज्ञान मा सामाजिक व्यवस्था को परिभाषा
प्रसिद्ध आविष्कारक: ए ए Z
स्टार वार वेथ: एरेबस को लागि एक गाइड पढ्नुहोस्
समाजशास्त्र मा समाजवाद को बुझन
कसरी शीर्ष एमबीए कार्यक्रम प्राप्त गर्न
सिमोन डी बेउवोइरर र दोस्रो-वेव पोथीवाद
दुई सेटहरूको चौथो के हो?
ग्रिडको साथ रेखाचित्र
एलएसडी को आविष्कार
स्पेनिश मा 'फ्यू' वा 'ईरा' को लागि उपयोग गर्दछ
विश्व ज्ञान (भाषा अध्ययन)
पृथ्वीको सतहको खनिज
ESP को क्लियरिएशन फारम के हो?